देशभरको सडक निर्माणमा तीव्रता – Aarthik Dainik
गृहपृष्ठ ∕ breaking ∕ देशभरको सडक निर्माणमा तीव्रता
देशभरको सडक निर्माणमा तीव्रता
कच्चपदार्थको बन्देज हटे पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेटिने
आर्थिक दैनिक मंसीर २४, २०७७ ११:४०
कोरोना महामारी र कच्चा पदार्थको असहजताका बीचमा पनि संघीय सरकारअन्तर्गत सडक डिभिजन, आयोजना तथा योजनाहरु मातहत देशभरका सडकको कामले सोचेभन्दा तीव्र गति लिएको देखिएको छ । गत चैतदेखि सुस्त भएको कामलाई तीव्रता नदिएमा निर्माण व्यवसायीलाई पनि व्यवसाय धान्न समस्या पर्ने देखिएको कारण उनीहरुलाई काम गर्नैपर्ने आन्तरिक दबाब थियोे भने सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि पुँजीगत खर्च गर्नैपर्ने दबाब परेपछि अहिले दुवै पक्षले कामप्रति ध्यान दिँदा अधिकांश आयोजनाले राम्रो प्रगति गरेका हुन् । तर, अहिले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त बाहेक अन्य आयोजनाहरुलाई कच्चापदार्थ निकाल्न स्थानीय प्रशासनले बाधा खडा गरेको कारण केही समस्या भने देखिएको छ । यद्यपि यसलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको सडक विभागको भनाइ छ ।
‘सडक विभागले भौतिक मन्त्रालयमार्फत पेश गरेको विवरण चित्त बुझ्दो नै छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरुलाई काम गर्नैपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक दबाब बढ्दै जाँदा उनीहरु पनि काममा खटेको देखिन्छ भने पुँजीगत बजेट धेरै पाएको सडक विभागलाई पनि काम देखाउनैपर्ने अवस्था आएकाले पहिलो चौमासिकको प्रगति विवरणलाई नराम्रो मान्न सकिन्न ।
कतिपय ठाउँमा कच्चा पदार्थको अभाव हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । यसलाई समयमै हल गर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्न सडक विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई समस्या पर्ने देखिन्न ।’ तर, कामले तीव्रता पाउने बेलामा स्थानीय प्रशासनले अधिकांश योजनालाई आवश्यक पर्ने बालुवा, गिट्टी तथा ढुंगा निकाल्न प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । यसमा भौतिक मन्त्रालयले चाँडै अग्रसरता नलिने हो भने अधिकांश सडकको ग्राभेल र कालोपत्रे काम ठप्प हुने देखिएको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत अहिले पी–वान (पहिलो प्राथमिकता)का ४८ र पी–टु (दोस्रो प्राथमिकता) का ६ सहित ५४ आयोजना कार्यक्रम सञ्चालित छन् । सडक विभागले भौतिक मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुको पुँजीगत बजेट एक खर्ब चार अर्ब सात करोड ९२ लाख छ । त्यसमध्ये प्रथम चौमासिक अर्थात् साउन, भदौ, असोज र कात्तिकका लागि २७ अर्ब १४ करोड ८६ लाखमध्ये ११ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख खर्च भइसकेको छ । उक्त खर्चअनुसार प्रथम चौमासिकमा विनियोजनको आधारमा ४३ दशमलव शून्य चार प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । वार्षिक विनियोजनाको आधारमा सडकतर्फको वित्तीय प्रगति ११ दशमलव २० प्रतिशत हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् आव २०७६/०७७ मा सडकतर्फ पहिलो चौमासिकको प्रगति सात दशमलव १९ प्रतिशत मात्र थियो । आव २०७५/०७६ मा १५ दशमलव २९ प्रतिशत, आव २०७४/०७५ मा ११ दशमलव २८ प्रतिशत, आव २०७३/०७४ मा ११ दशमलव पाँच प्रतिशत र आव २०७२/०७३ मा नौ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र थियो । कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि चालू आवको पहिलो चौमासिकको खर्चले सडकतर्फ राम्रो प्रगति भएको देखिएको हो ।
भौतिक मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारीहरुले भने विगतदेखि ट्र्याकमा रहेका आयोजनाको कारण सडकको प्रगति राम्रो भएको तथ्यांक आएको भन्दै आलोचनात्मक समर्थन गरेका छन् । तर, उक्त आलोचनाजस्तो पनि अवस्था छैन । जटिल र जताततै विवादमा मात्रै फसेको हुलाकीलगायतका आयोजनाको प्रथम चौमासिकको प्रगति ८० प्रतिशत माथि हुनुले सबै सही ट्र्याकमा रहेका आयोजनामा मात्र काम भएको मान्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
सडक विभागका अनुसार प्रथम चौमासिकमा तीन सय ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने एक सय ४२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण र एक सय ७७ किलोमिटर खण्डास्मित स्तरमा स्तरोन्नति भएको छ । ३५ वटा पुल निर्माणसम्पन्न भएको छ । १५औँ योजनाको नतिजा सूचकमा पनि राम्रो प्रगति सडकले हासिल गरेको देखिएको छ ।
दुई लेनसम्मको राष्ट्रिय राजमार्गको कालोपत्रे गर्न प्रथम चौमासिकमा आठ हजार चार सय ९४ किलोमिटरको लक्ष्य लिएकामा छ हजार चार सय ७४ किलोमिटर निर्माण पूरा भएको छ । त्यस्तै, दुई लेनभन्दा माथिको राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माणको लक्ष्य दुई सय २५ किलोमिटर प्रथम चौमासिकले लिए पनि एक सय ६८ किलोमिटर पूरा गरेको छ । त्यसमा द्रुतमार्गसमेत समावेश गरिएको सडक विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, नयाँ ट्र्याक निर्माणसहितको राष्ट्रिय राजमार्गको प्रथम चौमासिकको लक्ष्य तीन सय ५० किलोमिटर लिएकामा भने २८ किलोमिटरको मात्र प्रगति भएको छ । ठेक्कापट्टाको काम ढिला हुन गएको कारण प्रगति कम भएको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्ग नियमित मर्मतसम्भारको काम शतप्रतिशत पूरा भएको छ ।
प्रथम चौमासिकको कुन सडकको कति भौतिक प्रगति ?
१. हुलाकी राजमार्ग— ८१.४१ प्रतिशत
२. पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग— ५१.९४ प्रतिशत
३. कोशी करिडोर— ४०.३१ प्रतिशत
४. कालीगण्डकी करिडोर मालढुंगा–राम्दी–गैंडाकोट— ४२.५ प्रतिशत
५. कालीगण्डकी करिडोर बेनी—जोमसोम–कोरोला— ५.२ प्रतिशत
६. कर्णाली करिडोर— ३५ प्रतिशत
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुलाकी अब्बल : सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरुको प्रथम चौमासिकमा हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको देखिएको छ । प्रथम चौमासिकमा ८२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकामा ९० किलोमिटर निर्माण भएको छ । २३ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकामा २८ किलोमिटर र तीनवटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएमा दुईवटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रगति प्रथम चौमासिकको तुलनामा ८१ दशमलव ४१ प्रतिशत हो भने वार्षिक तुलनामा २५ दशमलव ९४ प्रतिशत हो ।
आव २०६६/०६७ देखि सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ५६ दशमलव २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५६ दशमलव ७६ प्रतिशत भएको छ । एक हजार सात सय ९२ किलोमिटरमध्ये छ सय दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने दुई सय १९ वटा पुलमध्ये ९७ वटाको निर्माणसम्पन्न भएको छ ।
यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रथम चौमासिकको भौतिक प्रगति ५१ दशमलव ९४ प्रतिशत छ । उक्त प्रगति वार्षिक प्रगतिको १३ दशमलव ३२ प्रतिशत हो । ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य प्रथम चौमासिकमा लिएकामा १४ किलोमिटर मात्र भएको छ भने दश किलोमिटर ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिएकामा साढे दुई किलोमिटर भएको छ । दुईवटा पुल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा एउटा पनि निर्माण पूरा हुनसकेन । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ बाट सुरु भएको पुष्पलाल लोकमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५४ दशमलव ५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५६ दशमलव ११ प्रतिशत भएको छ ।
उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको कोशी करिडोरको प्रथम चौमासिकको भौतिक प्रगति ४० दशमलव ३१ प्रतिशत भएको छ । उक्त प्रगति वार्षिक तुलनामा १४ दशमलव ९८ प्रतिशत हो । दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, पाँच किलोमिटर ग्राभेल गर्ने र दुईवटा पुल निर्माण हुनुपर्नेमा दुई किलोमिटर सडक चौडा मात्र भएको छ । आव ०६५/०६६ बाट सुरु भएको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत भएको छ । वित्तीय प्रगति १८ दशमलव ७६ प्रतिशत भएको छ । १४ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्ने कार्य नेपाली सेनाबाट भइरहेको छ ।
कालीगण्डकी करिडोरको मालढुंगा–राम्दी–गैंडाकोट खण्डको प्रथम चौमासिकको भौतिक प्रगति ४२ दशमलव ५ प्रतिशत भएको छ । उक्त प्रगति वार्षिक तुलनामा ११ दशमलव २५ प्रतिशत हो । प्रथम चौमासिकमा २० किलोमिटर कालोपत्रे, ४ किलोमिटर ग्राभेल र दुईवटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकामा १२ किलोमिटर कालोपत्रे, तीन किलोमिटर ग्राभेल र एउटा पुल निर्माणसम्पन्न भएको छ । यो आयोजनाको समष्टिगत प्रगति १९ प्रतिशत मात्र हो ।
कालिगण्डकी करिडोरकै बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको भौतिक प्रगति प्रथम चौमासिकमा ५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र भएको छ । उक्त प्रगति वार्षिक तुलनामा दुई दशमलव चार प्रतिशत मात्रै हो । १० किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्नुमा त्यो लक्ष्य पूरा भएको छ भने एक वटा पूल निर्माण सम्पन्न हुुनुपर्नेमा भएको छैन । आव २०७३/०७४ बाट सुरु भएको उक्त आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ५३ दशमलव पाँच प्रतिशत भएको छ ।
कर्णाली करिडोरको प्रथम चौमासिकको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत भएको छ । उक्त प्रगति वार्षिक तुलनामा दश प्रतिशत हो । प्रथम चौमासिकमा पाँच किलोमिटर ट्र्याक खोल्नुपर्नेमा एक दशमलव ५० किलोमिटर मात्र ट्र्याक खुलेको छ । आव २०६९/०७० बाट सुरु भएको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म २३ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र भएको छ ।